Ukufundwa kwe-Semalt: Yiziphi Izinzuzo Zokuchwepheshe Zokukhangisa Kwedijithali Okunikezela Kwakho Ibhizinisi le-E-Commerce
Noma iyiphi i-ejensi yokukhangisa enhle kufanele ikwazi ukusiza ibhizinisi lakho lokuCommerce likhulengokushesha ngenkathi unciphisa noma yikuphi ukucindezeleka okungenzeka ube nakho. Kungokwemvelo ukuthi bonke abanikazi bebhizinisi bafisa ukukhulisa izinkampani zabo, bakhiqize ngaphezuluukuthengisa nokufinyelela ezindaweni ezihamba phambili endaweni ethile yokukhangisa.
Njengoba kubonakala, udinga usizo ngezikhathi ezithile - reinigung zuerich. Ukuqasha ukumaketha kwe-digitali-agency kufanele ibe indawo enhle yokuqala. UJason Adler, umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt uchaza ukuthi yiziphi izinzuzo ezingu-8 ongazithola uma uqashe ochwepheshe be-digital.
I-ejensi yokukhangisa evamile iyakwazi ukudala, ukuthenga nokusakazatraffic lapho kudingeka khona. Kungani behle? Yebo, kungenxa yezizathu ezine:
Okuhlangenwe nakho. Ukuba nolwazi olunzulu lokusebenza nezinkampani ezahlukene,i-ejensi yakho yokukhangisa ngabe ibone inqwaba yemikhankaso ephumelelayo.
Inhlangano. Uzothola umbiko oningiliziwe mayelana nokuthi usetshenzisiwe kangakanani kumsebenzi
Ukusebenza kwesikhathi. Zisindise isikhathi esibalulekile ngokubavumela ukuba basingatheindawo yokuthengisa yebhizinisi ngenkathi uhlela zonke izinto.
Umnotho. Njengoba bebengaba ukuthenga okuningi kokukhangisa ngaphambiukubandakanyeka kwakho, bona (ama-ejenti) bangathola amazinga angcono.
Njengoba nje igama liphakamisa, ukumaketha kokuqukethwe kuhlose ukudala ihluzo, amavidiyofuthi ama-athikili abese ebahambisa ngenhloso yokuheha, ukubandakanya nokuguqula abagibeli kumakhasimende. Ezweni lanamuhla laphookuqukethwe okuphromotha kusetshenziselwa ngenhloso yokuvuselela abathengi, ukumaketha kokuqukethwe kudala inani. Yingxenye yokudayiswai-agency ukudala okuqukethwe okusha, okuthakazelisayo nokukhangayo kwakho.
Le nqubo yokukhangisa ayisebenziswanga ngokugcwele ngamabhizinisi. Noma kunjalo, ngeizinsizakalo ze-ejensi yokumaketha onakho ungaqiniseka ngemiphumela emihle. Vele udale uhlu lwalokho okumele kwenziwe nakhoi-agency izoyiphatha yona.
Kuyinto evamile kakhulu amabhizinisi ukuthi asebenzise amakhasi omphakathi ezokuxhumana - ikhasi le-Facebook, aIsiteshi se-YouTube, i-Google + noma i-akhawunti ye-Twitter. Ukubuyekeza lawa maqhinga njalo kungumuthi oyinhloko, okungenzeka ukuthi unqobeusizo lensiza yokumaketha.
Ukuklama Iwebhusayithi nokuthuthukiswa
Abanomabhizinisi baqhuba ibhizinisi ngezizathu eziningi. Abanye benza lokho nje ngobabangakwazi, futhi abanye bakwenze nganoma yisiphi esinye isizathu esihle. Ngeshwa, akuwona wonke umuntu onamakhono okudala iwebhusayithi yakhe siquumbono omuhle wokukhona kwe-intanethi (i-web design). Uma ungumuntu omusha, khona-ke i-ejensi kufanele ikusize.
I-Videography ne-photography ibalulekile uma kuziwa ekuthengiseni izinto kwi-intanethi.Cabanga ngesimo lapho umsebenzisi engenayo inkomba mayelana nokuthi umkhiqizo ubonakala kanjani - isithombe noma ividiyo kufanele ifike kahle.Lokhu kuzokwenziwa ngokugcwele ngesikhungo esihle sokumaketha.
Ukuhlelwa kwezinga lokuguqulwa (CRO)
Kunamakhulu ama-ejenti wokukhangisa enikeza i-CRO. Lokhu (i-CRO)lithembele ekuhlolweni kanye nokuqoqwa kwedatha ukuhlela kabusha okuqukethwe kwewebhu okuguqulwa ibe yimikhombandlela. I-CRO ingokwemvelo, ngakho-kekudinga ubuchwepheshe bezobuchwepheshe ukuthi kwenziwe.
Njengoba ibhizinisi likhula, uzothola izinselele eziningi. Ngokubaisibonelo, njengoba udala ukuthengisa okuningi, uthola imithwalo yemisebenzi yamakhasimende amaningi. Ngomugqa womkhiqizo obanzi, uthola ukwaziswa okwengeziweLandela. Phonsa eziningi izinketho zokukhangisa ,Izibuyekezo ze-SEO, amathuluzi wokumaketha ezokuxhumana nabantu futhi uzothola isithombe esibanzi.